अनशनस्थलबाटै डा. केसीको आग्रह, 'आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी उद्धारमा खटिनु ' - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
अनशनस्थलबाटै डा. केसीको आग्रह, 'आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी उद्धारमा खटिनु '
अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम स्थगित गरी वाढी र पहिरो पीडितको उद्धारमा खटिन चिकित्सकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
लगातारको बर्षापछि तराईका तथा भित्रि मधेशका अधिकांश स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै अनशनस्थलबाटै डा. केसीले आफ्ना सुभचिन्तक चिकित्सकहरुलाई सो आग्रह गर्नुभएको हो । देशको अहसज परिस्थितिको कारण आन्दोलन स्थगित गर्दै सम्पुर्ण बाढी पहिरो पीडित नागरिकको उद्धार र सेवामा खटिन उहाँको बिशेष आग्रह थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष ढुन्डीराज पौडेललाई टेलिफोन गरी डा. केसी सो आग्रह गर्नुभएको उहाँका सहयोगीले बताएका छन् ।
अनसनरत डा. केसीको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ अकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्पपारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा बाढी र पहिरो पीडित जनताको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकुल असर परेको छ ।
डा. केसीको अवस्था नाजुक
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन पारितको माग गर्दै विगत २० दिनदेखी आमरण अनसनमा बसेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपुर्ण रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन ।
डा. केसीको छातीमा दुखाई अत्यन्त पिडादायी बनिरहेको र अक्सिजनको मात्र कम देखिन थालेको चिकित्सकले बताएका छन् । रगतमा घटिरहेके इलेक्ट्रोलाईटकका कारण मुटु अचानक बन्द हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सको भनाई छ ।